I-Roseberry Penthouse-Downtown-Deck, Ukubukwa nobhavu oshisayo
McCall, Idaho, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Tricia
Siyakwamukela, futhi siyabonga ngokusicabangela eholidini lakho elilandelayo! Le ndlu esanda kulungiswa kabusha, enezitezi ezimbili ineziphetho eziphezulu ngokusonteka kwe-charm yendawo. Itholakala enhliziyweni yedolobha iMcCall Idaho, izinyathelo nje ukusuka ezindaweni zokudlela zasendaweni, amapaki kanye nePayette Lake. Idekhi elingana ne-viking iyindawo ekahle yokujabulela iziqhumane, ama-parade endawo, nesikhathi sekhwalithi nomndeni nabangane. Ifakwe ngokugcwele ubhavu oshisayo kanye ne-bbq. Jabulela uhambo olunethezekile, oluhlukile lwazo zonke izinkathi zonyaka.
Ikhishi elihlonyiswe ngokugcwele, ikhebula nama-smart TV's, iBluetooth Stereo ne-WIFI. Ingasaphathwa eyedekhi ehamba phambili eMcCall, esendaweni ekahle yokubuka ngeso lezinyoni zonke izinto ezenzekayo zikaMcCall.
4.95(238 okushiwo abanye)
Le ndawo iphakathi kwedolobha phakathi kwayo yonke into. Hamba uye ezindaweni zokudlela ezitolo nasechibini.
Ababungazi basebenza esizeni esingaphansi kwa-McCall Sports Exchange futhi batholakala ngo-9-6 ukuze babelane ngolwazi lwabo lwendawo, futhi bakusethele izaphulelo kugiya lokuzilibazisa langaphandle ukusuka emabhayisikili ukuya kweye-SUP.
UTricia Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- McCall namaphethelo